Ffmpeg: ntughari nke otutu media | Site na Linux
Ffmpeg: ịtụgharị multimedia formats
Nke a bụ obere ndu n'ịtụgharị ọdịyo faịlụ site na iji ffmpeg.
1 Formatsdị ọdịyo
2 Formatsdị vidiyo
3 Gụnye ndepụta okwu na vidiyo
4 Tọghata video ka OGV Theora usoro
4.1 ọ bụla usoro vidiyo -> Ogg Theora
4.2 Lelee nsonaazụ ahụ
4.3 Ndị ọzọ ntụgharị
Nke a bụ iweda ogo nke MP3:
$ ngwu -b 64 source_file.mp3 ebe_file.mp3
64 ga - abụ bitrate ọhụrụ nke faịlụ ahụ. Enwere ike iji nke ọ bụla n'ime ụkpụrụ ndị a: 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320. Na elu bitrate, elu ọdịyo dị elu (na nke ka elu Nha faịlụ ahụ).
Mp32ogg mmemme achọrọ
$ sudo ikike wụnye mp32ogg
$ mp32ogg egwu.mp3 music.ogg
Iji tọghata dum nchekwa
Ndị a bụ ụfọdụ mgbanwe ndị a na-ahụkarị na faịlụ ụda Mgbuka.
Mgbe oke ab anyị ga-ezipụta na ụta MP3 (192 n'ihe atụ).
$ ffmpeg -i inputFile.wma -f mp3 -ab 192 Ihe Ntughari.mp3
$ ffmpeg -i egwu.mp3 -acodec amr_nb -ar 8000 -ac 1 -ab 32 music.amr
$ ffmpeg -i music.wav -acodec amr_nb -ar 8000 -ac 1 -ab 32 egwu.amr
Wepụ ọdịyo site na faịlụ MPEG ma gbanwee ya na MP3
$ffmpeg -i video.mpg -f mp3 audio_track.mp3
$ ihere -Ow -s 44100 -o output.wav input.mid
$ ihere -Og -s 44100 -o output.ogg input.mid
Commonfọdụ ndị na-atụgharị uche na vidiyo vidiyo ka edepụtara n'okpuru iji Mgbuka.
$ ffmpeg -i ihe nkiri.avi -acodec mp3 -ar 11025 ihe nkiri.flv
Site n'ụdị 9.04 ị ga-etinye ngwugwu libavcodec-unstripped-52 wee dochie '-acodec mp3' na '-acodec libmp3lame' na nhọrọ iwu.
Na-agbakwunye nhọrọ -hq jiri ogo dị elu.
$ ffmpeg -i myfile.avi -ụkwalite pal-vcd myfile_vcd.mpg
Nke a bụ usoro Dijitalụ Dijital, otu usoro nke igwefoto vidiyo dijitalụ na-emepụta ma ọ bụ nke a ga-eji maka edezi ya na Kino.
$ ffmpeg -i movie.avi -nweta pal-dv movie.dv
Nke a na-enye m ụfọdụ njehie oge oge m na-anaghị ahụ ka a hụrụ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ izere ha, ị ga - eme ya otu a:
$ mencoder ihe nkiri.
Wayzọ ọzọ ime ya:
$ ffmpeg -i movie.avi -vcodec dvvideo -acodec oyiri -f dv movie.dv -hq
Kino na-agụkwa usoro AVI emere n'ụzọ dị otú a (dịka ọmụmaatụ site na FLV):
$ mencoder -oac mp3lame -ovc xvid -of avi -xvidencopts bitrate = 1350 -o mmepụta.avi input.flv
$ ffmpeg -i ihe nkiri.3gp -vcodec mpeg4 -acodec mp3 movie.avi
$ ffmpeg -i file.mpeg -s qcif -r 12 -ac 1 -ar 8000 -b 30 -ab mmepụta 12
Ma obu jiri otutu agwa:
$ ffmpeg -i file.mpeg -s qcif -r 15 -ac 1 -ar 8000 -b 256000 -ab mmepụta 15
$ ffmpeg -i movie.mpg -acodec mp3 -vcodec xvid -b 687 nkiri.avi
$ ffmpeg -i nkiri.mpg -vcodec flv -y movie.flv
Faịlụ dapụtara enweghị ozi metadata n'ụzọ ziri ezi. Nke a pụtara na mgbe ị na-eji faịlụ na Flash video ekiri dị ka Igwe vidiyo Flash faịlụ ahụ ga-adị mma mana ogwe ọganihu agaghị emelite. Idozi nke a na-aba uru Ogba2 na ị ga-ahụ ya n'ime http://inlet-media.de/flvtool2. Emere ya na Ruby ka ị ghazie itinye ngwugwu kwekọrọ. A na-eji ya dị ka nke a:
$ flvtool2 -U ihe nkiri.flv
Anyị nwekwara ụlọ ọrụ ọzọ akpọrọ Ihe MetaData FLV na ọ bụrụgodị na ọ bụ maka Windows, ọ na-arụ ọrụ zuru oke na Mmanya (ma ọ dịkarịa ala ụdị usoro iwu). A na-eji ya dị ka nke a:
$ mmanya flvmdi.exe movie.flv
Zọ ọzọ iji tọghata Flv format na-eji ebe nchekwa koodu:
$ mencoder nkiri.avi -o movie.flv -of lavf -oac mp3lame -lameopts br = 32 -af lavcresample = 22050 -srate 22050 -ovc lavc -lavcopts vcodec = flv: vbitrate = 340: autoaspect: mbd = 2: trell: v4mv -vf scale = 320: 240 -lavfopts i_certify_that_my_video_stream_does_not_use_b_frames
$ mencoder -mf na: w = 800: h = 600: fps = 0.5 -ovc divx4 -o mmepụta.avi * .jpg
N'ihi ya, ọ na-egosi gị foto ọ bụla sekọnd abụọ, ọ bụrụ na ịchọrọ sekọnd anọ ọ bụla ị kwesịrị itinye 0.25 na fps.
Ọ bụrụ na iwu a anaghị arụ ọrụ maka gị, gbalịa
$ mencoder "mf: //*.jpg" -mf fps = 0.25 -vf scale = 480: 360 -o mmepụta.avi -ovc lavc -lavcopts vcodec = mpeg4
Nke ị ga - enweta vidiyo nke faịlụ jpg niile dị na ụzọ ị ga - esi malite iwu ahụ na - egosi gị foto 1 na 4 sekọnd ọ bụla.
Gụnye ndepụta okwu na vidiyo
$ mencoder -ovc lavc -oac mp3lame movie.avi -o movie_with_subtitles.avi -sub ndepụta okwu.srt
Tọghata video ka OGV Theora usoro
Ogg Theora bụ koodu vidiyo nke etinyere na ndabara na Ubuntu, yabụ na ọ gaghị adị gị mkpa ịwụnye mkpọ koodu ọ bụla iji kpọọ ha na Ubuntu (nke ahụ bụ uru nke theora). N'okpuru bụ ụfọdụ ihe atụ nke video tọghatara iji ffmpeg2theoraIji wụnye ya, anyị na-emeghe ọnụ (ngwa> ngwa> ọnụ) ma dee:
$ sudo ikike wụnye ffmpeg2theora
Ffmpeg2theora bụ usoro iwu (ọ bụghị ihe ngosi), yabụ ejiri ihe niile site na njedebe, vidiyo ịchọrọ ịgbanwe ga-adị na folda ụlọ onye ọrụ.
ọ bụla usoro vidiyo -> Ogg Theora
$ ffmpeg2theora video clip.extension
nke a ga - emepụta Ogv Theora faịlụ a na - akpọ video clip.ogv. Iji encode ya ọzọ àgwà, ka na-ekwu video àgwà: 7 na ọdịyo àgwà: 3:
$ ffmpeg2theora -v 7 -a 3 obere vidiyo. ndọtị
I nwekwara ike iji v2v atọrọ ka encode gị video
$ ffmpeg2theora -p nyochaa video clip.dv
$ ffmpeg2theora -p pro vidiyo vidiyo.dv
na ngbanwe nke vidiyo na-amalite site na nke abụọ nke 10 wee kwụsị na nkeji nke abụọ nke vidiyo ahụ
$ ffmpeg2theora -s 10 -e 120 video clip.extension
na video britrate bụ 512 na ọdịyo 96
$ ffmpeg2theora -V 512 -A 96 vidiyo vidiyo. ndọtị
video na-agbanwe na 640 × 480
$ ffmpeg2theora -x 640 -y 480 video clip.extension
ebuli video size
$ ffmpeg2theora --were ihe nlere vidio. ịgbatị
ezipụta mmepụta aha (video ugbua koodu)
$ ffmpeg2theora -o aha vidiyo ọzọ aha-aha. mgbakwunye
dị ka o doro anya na ị nwere ike iji iwu ndị gara aga na otu akara
$ ffmpeg2theora -s 10 -e 120 -V 512 -A 96 x 640 -y 480 --ozuo -o vidiyo vidiyo ọzọ-aha. mgbakwunye
Lelee nsonaazụ ahụ
Ọ bụrụ na ndị lekwasịrị format adịghị akwado site na mgbasa ozi ọkpụkpọ Totem can nwere ike iji ngwa ahụ ffplay ihe na-abanye na ngwugwu ffmpeg, ọ ga-egwu ọ bụla usoro na-akwado site na ffmpeg. Nke a bara uru, dịka ọmụmaatụ, maka usoro ọdịyo nke mobile AMR.
Ndị ọzọ ntụgharị
Tọghata maka vidiyo vidiyo efu na-eche ekwentị gị, iPod, PSP, PC Ọ bụ ọrụ ntanetị n'ịntanetị, yabụ na ịnweghị ka etinye ihe ọ bụla na PC gị.
Zamzar Ihe ntụgharị ntanetị ntanetị ọzọ na - akwụghị ụgwọ. Ọ na-ekwe ka ịtụgharị ma akwụkwọ ma ọdịyo na vidiyo.
Azụ Ọzọ ntụgharị usoro ntanetị!
Mbudata Ntanetị Ọ bụ a otutu-agbanwe Ntụgharị na a pụtara mfe onye graphzi interface. Na-arụ ọrụ na otu nsụgharị Mgbuka agbakọta iji kwado usoro ndị ọzọ.
Arista transcoder Ọ bụ ọhụrụ oru ngo na ukwuu mmemmem na ntughari nke video formats, karịsịa. Ihe osise dị oke mma, ọ bụ ezie na akabeghị ya maka Ubuntu ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale ya, ị ga-eme ya n'ụzọ ochie.
Tọghatara faịlụ Tọghata faịlụ bụ ọrụ ntanetị n'ịntanetị ọhụrụ. Ọ bụ otu nhọrọ ndị ọrụ nwere mgbe ị na-ahọrọ ọrụ na-enye anyị ohere ịmebata faịlụ na ụdị ụfọdụ ka enwere ike gbanwee ya na faịlụ ọzọ na otu ma ọ bụ usoro ọzọ n'ime otu ụdị.
cometdocs Ọ bụ ihe ntụgharị ntanetị dị ike nke na-arụ ọrụ na ihe karịrị ụdị 50 dị iche iche, na-enye gị ohere ịme ụdị ntụgharị ọ bụla site na ihe nchọgharị ahụ, na-enweghị mkpa ịwụnye ihe ọ bụla ma na-akwụ ụgwọ kpamkpam.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Ffmpeg: ịtụgharị multimedia formats
Daalụ ... Amaghị m ihe niile mmemme dị mfe ma dị ike nwere ike ime, kwa ụbọchị, ekwenyesiri m ike na mkpebi m ịgbanwe na Linux (Enwere m OpenSuse 12.2)
Juan Escobar Arias nwere ebe obibi dijo
Kedu onye nchịkọta vidiyo nke a hụrụ na foto ahụ?
Zaghachi Juan Escobar Arias
Ọ na-akpọ «Cinelerra»
Ana m ewepụ okpu m gaa isiokwu dị mma na ozi bara uru, ekwesịrị m ịza ajụjụ na ụnyaahụ 12-12-2011 m na-achọ ịgbanwe usoro vidiyo wee hụ ihe ọmụma sitere na Ffmpeg, mgbe m gụsịrị m hụ ike ya ma taa ana m ahụ isiokwu a nkọwa zuru ezu.
Zaghachi na eM Di eM
Isi ọwụwa ọzọ gwọọ blog. Nke kacha mma na ,ntanetị, n’enweghị mgbagha.
Ebido ngwa ngwa na Ubuntu ohuru
Kedu ihe bụ Mono na gịnị kpatara ya nwere ike ịbụ ihe egwu?